DOWNLOAD KASPERSKY KASPERSKY VIRUS REMOVAL TOOL - PROGRAMME REVIEW - 2019
Excel dia tsy tonian-dahatsoratry ny spreadsheet, fa fitaovana matanjaka ho an'ny karajia matematika sy statistika samihafa. Ny fampiharana dia manana andraikitra marobe natao ho an'ireny asa ireny. Marina fa tsy ny karazan'ity endri-tsoratra ity no mavitrika. Ireo endri-javatra miafina ireo dia ahitana fitaovana iray. "Data Analysis". Andeha hojerentsika ny fomba hamadihana izany.
Ampidiro ny kitapo fitaovana
Manararaotra ireo endri-javatra izay omen'ny asa "Data Analysis", mila mampiasa fitaovana maromaro ianao "Analysis Package"amin'ny fanatanterahana hetsika sasany ao amin'ny fikandrana Microsoft Excel. Ny algorithm amin'ireny hetsika ireny dia mitovy amin'ny dikan-tenin'ny fandaharana amin'ny taona 2010, 2013 ary 2016, ary tsy misy fahasamihafana kely amin'ny version 2007.
Kitiho ny tab "Rakitra". Raha mampiasa ny version of Microsoft Excel 2007 ianao, fa tsy ny bokotra "Rakitra" click icon Microsoft Office amin'ny ambaratonga ankavia amin'ny varavarankely.
Kitiho ny iray amin'ireo zavatra hita eo amin'ny ampahany havia amin'ny varavarankely misokatra - "Masontsivana".
Ao amin'ny varavarankely fikandrana Excel, mandehana any amin'ny faritra "Add-ons" (farafaharatsiny amin'ny lisitra eo amin'ny ilany havia amin'ny efijery).
Ao amin'ity fizarana ity dia ho liana amin'ny ampahany ambany amin'ny varavarankely isika. Misy mari-pamantarana iray "Management". Raha toa ka ao anaty endrika miloko mifototra aminy, ny sandany dia tsy mitovy Excel Add-insdia mila manova izany amin'ny voatondro. Raha ity fametrahana ity ity dia tsindrio fotsiny ilay bokotra. "Mandehana ..." eo ankavanany.
Misy varavarankely kely misy fanampiana fanampiny misokatra. Anisan'izy ireo, mila mifidy ilay singa ianao "Analysis Package" ary tsindrio ity. Aorian'izany, tsindrio ilay bokotra "OK"eo an-tampon'ny faritra havanan'ny varavarankely.
Rehefa avy nanao ireo hetsika ireo, dia haverina ny asa voafaritra, ary ny fitaovana ampiasaina dia hita ao amin'ny rindranasa Excel.
Manomboka ny asan'ny vondrona Data Analysis
Ankehitriny dia afaka mandatsaka ny iray amin'ireo fitaovana ao amin'ny tarika isika. "Data Analysis".
Mandehana any amin'ny tablette "Data".
Ao amin'ny tabilao misokatra eo amin'ny sisiny farany amin'ny kasety dia sombina fitaovana. "Analysis". Tsindrio ny bokotra "Data Analysis"izay navoaka tao.
Aorian'izany, ny varavarankely iray dia apetraka amin'ny lisitry ny fitaovana isan-karazany manolotra ny asa "Data Analysis". Anisan'izany ireto:
Ny karazana fandinihana samihafa ny varotra, sns.
Misafidiana ny asa izay tiantsika hampiasaina ary tsindrio ny bokotra. "OK".
Ny asa ao amin'ny asa tsirairay dia manana algorithm ny hetsika. Mampiasa fitaovana vondrona "Data Analysis" nofaritana tamin'ny lesona misaraka.
lesona: Fandaharam-pifanarahana amin'ny Correlation amin'ny Excel
lesona: Fandinihana ny regression amin'ny Excel
lesona: Ahoana ny famoronana histograma amin'ny Excel
Araka ny hitanao, na dia ny fanakanana fitaovana aza "Analysis Package" ary tsy mavitrika amin'ny amboalohany, dia mora tsotra izao ny dingan-dava. Amin'izany fotoana izany, raha tsy fantany ny algorithm mazava amin'ny hetsika, dia mety tsy ho afaka hampiasa haingana io asa mahomby io ny mpampiasa.